Indlela Qala Forex Ukuhweba - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolIndlela Qala Forex Trading
Usuzo ukuqala ibhizinisi elisha. Ngenhlanhla ingqalasizinda ibhizinisi yakho entsha endaweni. Kuyinto Inethiwekhi yomhlabajikelele yama-ngamabhange kanye lwemali wabenza ukuthi ukuxhumana nge-inthanethi ukwenza izimakethe phezu amabili nane ihora isisekelo lwemali abahwebi, Ezinkulu kanye nezincane, emhlabeni wonke.
Njenganoma yimuphi ibhizinisi, uzodinga kwehhovisi ethulile, ukhululekile futhi kuqhathaniswa khulula izithikamezo. Ihhovisi kufanele ifakwe okusheshayo ikhompyutha esinokwethenjelwa ngokuthi has a okunokwethenjelwa inthanethi. Kuyinto njalo mnandi ukuba inhlanganisela imishini yokukopisha, iphrinta futhi ifeksi exhunywe kwikhompyutha yakho.
Uma une-computer yakho futhi inthanethi esikhundleni, sincoma ukuthi ulandele lezi zinyathelo ukuze uqalise:
Ukuba nelukuluku futhi ufunde konke ongakwazi ukukufunda Forex
Iphepha yokuhweba akhawunti demo
Khetha nomdayisi Forex futhi baqala ukuhweba real kunothile encane
Hlomisani ngokwakho ne ukusika amathuluzi onqenqemeni kanye nezinhlelo
Gwema newbie amaphutha
Gcina ukufundisa wena mayelana forex yokuhweba.
1. Yiba Enelukuluku Futhi ufunde konke ongakwazi ukukufunda Mayelana Forex.
Siye hlinzeka you esikoleni ukuze ufunde mayelana Forex for khulula. Thina ukweluleka wena ukufunda zonke izihloko, ukufundisa wena kuqala mayelana eziyisisekelo futhi ngendlela enizosebenzisa ngayo imali, bese ufunda mayelana izinkomba ezobuchwepheshe kanye abalulekile, njengelungelo lwemali eziyisisekelo ethize.
Ukufunda kwakho akufanele kuphele ngewebhu yethu, noma kunjalo. Kukhona inotho yempahla yokufundisa ku-intanethi: kunezingosi zezemfundo ezinjengeyethu, kanye nezinqwaba zezinkundla ezihlobene ne-Forex njengezethu. Lezi zinkundla ziyindlela enhle yokuxhumana nokuxhumana nabanye bobuchwepheshe obuhlukene kanye namasethi wekhono. Ungabuza noma yikuphi umbuzo oyithandayo futhi othile onolwazi olufanele nolwazi kulokhu kudingeke akuphendule. Kukhona nokuningi kwezincwadi zemfundo ye-Forex ongayifunda emtatsheni wezincwadi noma ukuthenga inthanethi.
Funda, lalela CD, khona izingqungquthela, ukufunda izinkundla nsuku zonke futhi ukuqhuba ulwazi lwakho olusha. Konke ukufuna ukwazi ukuhweba selinqunyiwe noma kukhulunywe ngakho abahwebi yimpumelelo. Nakuba ungakwazi ukukhokhela lokhu imfundo, iningi ke zingatholakala khulula. Zama ukufunda okuthile nsuku zonke.
Kodwa ukufunda is hhayi nje ukufunda nokulalela. Kumele bawenze, okungukuthi, kufanele ukuqhuba Ukuhweba yakho (okokuqala e-akhawunti demo bese ku-akhawunti yangempela).
2. Iphepha Trade Forex Ngo I-akhawunti Demo
Uma ungakaze adayiswa Forex, sicela uqale off ngidayisa i MT4 i-akhawunti demo. akhawunti Demo uvumele abasebenzisi ukusebenzisa "imali yekudlala" ukuzijayeza ngidayisa nge idatha bukhoma. Anikeza wabhekana nesimo esifanayo kakhulu sengathi ngidayisa nge "wangempela-imali" akhawunti real bukhoma. Uma ukudala "Paper Ukuhweba" akhawunti uku akwazi ukudayisa imali play njengoba bekungokwethu imali yakho kanzima.
Ngalezi demo ukuhweba ama-akhawunti uzokwazi ukubona ukuthi izimakethe lwemali baziphathe kanjani yesikhulumi liziphatha, nendlela oziphatha ngayo ibenza lapho sibhekene nezimo lobuchwepheshe ayingqalasizinda ezithinta emakethe. Kufanele engabe welapha kule akhawunti demo sina uma ufuna ufunde kokuhlangenwe nakho kwakho.
Singabantu abameli enamandla ekuhwebelaneni Metatrader (MT4) ngoba yesikhulumi kwekhethelo Forex abadayisi wabathengi. Kuyinto khulula, isebenziseka ngezindlela eziningi futhi Iza ifakelwe eziningi uchwepheshe abeluleki, amathuluzi, izinkomba kanye nemininingwane ukuvumela imanuwali elula eyinkimbinkimbi kanye nokuhweba othomathikhi.
Lapho ngifuna i MT4 i-akhawunti ye-demo, ixwayiswe ukuthi iningi liphela kuphela izinyanga ezingu-1- 3 bese liphela. Kuyinto encane kuphela ehlala phakade, okungukuthi, ayipheli isikhathi eside uma uhweba kuyo kanye ngenyanga. Ngiyathanda ama-akhawunti we-demo okuqhubekayo ngokuhambisana nama-akhawunti we-demo we-1-3 ephelelwa yisikhathi ngenxa yezizathu ezicacile. Ngemuva kokuba ulande futhi ufaka i-demo yakho, chofoza ku-"Ifayela" bese uchofoza ku-"Vula i-Akhawunti." Kuzobe sekucela ukuthi ukhiye ulwazi lwakho olufanele, kanye nezinketho zokukhetha imali yakho yesisekelo, ukukala nokuqala inani. Inani le-demo ye-Deposit kufanele lifane nalokho okulindele ukuhweba esikhathini esizayo sokuphila.
Uzothola login yakho nephasiwedi ngokushesha ngemva ukudala i-akhawunti demo. Khumbula ukopishe bese unamathisela ngemvume lakho lomsebenzisi nephasiwedi ukuze ifayela .txt bese uwabeka endaweni ephephile. Uma ulahlekelwa ke ngeke ukwazi ukulithola futhi, ngisho noma ushayele broker yakho.
Sikhuthaza abahwebi ukuhlola yokufunda namakhono abo kuqala ku-akhawunti demo futhi yakha ithemba lakho ngidayisa ke ngaphambi kokuzibulala dolobha yangempela. Lokho okushiwo, ngempela awazi wena njengoba abadayisi uze adayiswa e-akhawunti yangempela.
3. Zama Ukuhweba Real With A Good Forex Broker
Nakuba demo ukuhweba adingekayo, ekugcineni kufanele zisebenze wena nokuhweba-akhawunti yangempela ngemali langempela emgqeni. Awusoze wazi ngempela kangakanani njengoba abadayisi uze ukudayisa nge-akhawunti yangempela okungenani zikasayizi eziningi. Zonke ukulinganiselwa komuntu yokudayisa (ukuhaha, ukwesaba, ukuzazisa, njll) kungenziwa kuphela ihlolwe bese efakwa ngaphansi kolawulo uma imali yangempela kithi kusengozini.
Ziningi Forex wabathengi ongakhetha kuzo, njengoba nje kunoma iyiphi enye emakethe, futhi siye hlinzeka you kwesigaba ephelele, "Ukukhetha Forex Broker," ukukusiza wenze ukukhetha kwakho. Uyonika broker ulwazi lwakho lomuntu siqu i-akhawunti ngaphansi kokugunyazwa yi broker. Ungakwazi ukuxhasa akhawunti yakho evunyiwe ngokusebenzisa okukhethwa ahlukahlukene uxhaso, kuncike nomdayisi, ezifana credit card, ibhange wire, PayPal, Moneybookers, WebMoney. Kungaba osheshayo noma izinsuku ezimbalwa, kuye ngokuthi indlela.
Uma upheqa i-forex nomdayisi ezinhle, ukubuza imibuzo engezansi:
Ingabe i FX ukusabalala broker sika ongaphakeme ngokwanele?
Ingabe i FX nomdayisi bhalisiwe neziphathimandla zokulawula nokuhloswe ngazo ukuvikela iklayenti isithakazelo?
Hlobo luni amathuluzi owenza FX nomdayisi ukunikeza?
Hlobo luni Inqubomgomo margin kuwo?
Hlobo luni nokwesekwa kwamakhasimende owenza FX nomdayisi ukunikeza?
Uma ungenalo dolobha eyanele, hlola ukuthi FX nomdayisi inikeza mini noma okungcono nakakhulu, ama-akhawunti micro ezidinga uqalisa izimali ongaphakeme?
4. Hlomisani Wena Nge Cutting Edge Amathuluzi Futhi Systems.
Ngokuya wombuso wakho yesikhulumi art zokuhweba kanye ne-software charting, une-ke ngoba khulula nge thwebula kwakho Metatrader 4 (MT4). MT4 Kulula ukusebenzisa, ke iza kakade ifakwe eziningi izinkomba ewusizo futhi ukuhweba amathuluzi, futhi ngaphezu kwakho konke, kuba khulula nezinkulungwane abahwebi uyisebenzisa.
Sikholelwa ngokuqinile kukukhuthaze nekama kuwebhu futhi izinkundla izinkomba enamandla nochwepheshe abeluleki (EAs) akhiwa coders smart ukusiza abahwebi.
Kuvele Isazi Advisor, ngokuthi nje i EA, kuyinto forex robot esiklanyelwe 100% ukuhweba mechanical ku komuntu MT4 platform. I EA uqaphe emakethe 24 / 7 ngoba ukuthenga futhi adayise amathuba ngesisekelo sezimo ukuhweba ihlelwa. EAs Abaningi angayizuza ngoba khulula ezindaweni ezahlukene ku-intanethi. Akhona namanye amaningi angathengwa, futhi nakuba robot izindleko ziyahlukahluka, eziningi zithengiswa endaweni ethile phakathi kwe- $ 90 ne-$ 300. Noma kunjalo, abathengi baqaphele: amanye ama-robot ahlambalaza, futhi ama-robot amaningi azokwenza umthengisi abe acebile kunalokho oyoke uthengise robot. Eqinisweni, amarobhothi kakhulu uyokusiza ulahlekelwe imali engaphezu kuka-win ngenxa iqiniso elisobala lokuthi emakethe kuyingozi ngokudlulele 95% amarobhothi angehluleka ezinye Kungenxa yezizathu ezifanayo 95% abadayisi behluleka.
5. Gwema Amaphutha Forex AbaHwebi sika Evamile.
Ngokuphazima kweso, gwema ukuhweba nemizwelo yakho, ugweme ukuhweba ngokweqile i-akhawunti yakho, ugweme ngaphezulu-ukuhlala ezindaweni zakho, ugweme ukuphathwa kwemali embi, ugweme ukubeka engozini engakutholakali ku-Forex yokuhweba. Ukuhweba nge-Forex kuhilela izingozi eziningi nabadayisi bahlale belulekwa ukuba bahwebe futhi bafunde ngesikhathi esifanayo. Yazi amaphutha avamile eyenziwa ngabathengisi abaningi be-Forex bese ubeka imithetho yakho ngesikhathi sokuhweba FX emakethe. Ukudayisa ayiyale futhi njalo ukulungiselela ukufunda imiqondo emisha evela kwabanye.
6. Gcina Ukusebenzisa Ngo Ukuhweba yakho Ezemfundo.
Sisanda ngeke siyeke egcizelela ekufundisweni utshalomali. Kuyinto into ebalulekile kakhulu kutsi kucale ibhizinisi yakho ezweni forex. Uma umusha ku-Forex Ukuhweba, kumele ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ungakwazi, uthole izandla-on isipiliyoni nokufunda okuningi FX izincwadi nezihloko inthanethi ngangokunokwenzeka ukuze zifundise mayelana FX emakethe. Udinga ilukuluku, isikhathi kanye nesifiso ukuthola okuningi ulwazi. Uma usukulungele, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba sibheke ku izingozi isici in Forex Ukuhweba futhi ukuhweba ngemali yakho siqu, ukufunda ezivela ezweni sidilize kanzima kanye nesipiliyoni.
A yokufunda kancane luyingozi
Phuza ezijulile noma ukunambitha hhayi Pierian Spring
okusalungiswa yabo engajulile mawakujabulise ubuchopho,
Futhi ukuphuza kakhulu sobers kithi futhi
Abahwebi abajabulela impumelelo kokuqala ngokuvamile zijeze kamuva, njengoba abathengisa ambalwa yimpumelelo angase abanike ithemba zamanga. Khona-ke angabe esaba ukufunda futhi bafunde, mhlawumbe ukudayisa izikhundla ezinkulu, futhi ulahlekelwe eningi-dolobha yawo. Kungcono ukuthatha isikhathi sakho futhi ufunde ngoba kukhona ukuphila konke amathuba.
Gwema amaphutha ezivamile Forex abadayisi sika
Gcina nokutshala izimali ezinhlelweni zemfundo yakho Ukuhweba
Iphepha ukuhweba Forex ku-akhawunti demo
Qala Forex Ukuhweba
Zama Ukuhweba Real nge Okuhle Forex nomdayisi
Yini Ingabe ngidinga Qala Trading Forex